Global Voices teny Malagasy » Djibouti Ao Anatin’ny Ady Amin’ny “djihadisma” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jona 2015 3:50 GMT 1	 · Mpanoratra Alassane ndoumbe Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Djibouti, Frantsa, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika
Djibouti: Ny Kaporaly Darojo Daher, avy amin'ny Africacom CC-BY-20
Mitana toerana goavana amin'ny tolona ataon'ny tandrefana handresena ny “djihadisma” i Djibouti, firenena kely iray difotra ao anatin'i Afrika ary any amin'ny saikinosy arabo. Sady tany mandray ireo tobin-tafika vahiny izy, izay Etazonia no voalohany amin'izy ireny, no mandray koa ireo mpialokaloka, Yemenita indrindra indrindra. Omen-danja sy ankamamiana ankehitriny io firenena ao amin'ny tandrok'i Afrika io.
Tany feno zava-mifanohitra tsy takatry ny saina i Djibouti. Voahodidin'i Érythrée, Etiopia sy Somalia, tsy ilaozan'izay firenena lehibe mikatsaka ny hiaraka aminy ny Repoblika Djiboutiana, iray amin'ireo bitika indrindra ao amin'ny Tanibe Afrika. Ismaël Omar Guelleh no filoha mitarika azy hatramin'ny 1999, somary mitongilana mankany amin'ny Amerikana kokoa ny politikan'ny firenena, na dia somary malailay amin'izany tokim-panompoana izany ihany aza ny vahoaka. Manomboka ratsy fijery ny ady atao amin'ny “djihadisma” ry zareo Djibotiana – na io ny atao amin'ny al-Qaïda ,na atao amin'ny Firenena islamika (EI) – izay lasa toy ny ho mandrakizay ka atahoran-dry zareo ny hitsirian'ny fanafihan'ireo mpampihorohoro eo amin'ny taniny, toy ny ao Yemen mpifanila vodirindrina aminy. Io no zavatra faharoa mahavaka ny saina: toerana fandalovana ho an'ny ady atao amin'ny djihadisma any amin'ny faritra ity firenena ao amin'ny tandrok'i Afrika ity, izay miantoka ny fivelomany ihany koa anefa.
Djibouti, toerana fandalovan'ny ady atao amin'ny djihadisma
Noho ny toerany ao anaty jeografia – any amin'ny farany atsinanan'ny tanibe afrikana ary elanelana tsy lavitra loatra an'i Yemen, sy ny Afovoany Atsinanana raha hitarina – Djibouti, tany mandray ireo tobin-tafika iraisam-pirenena marobe, ary ankamamian'ireo firenena rehetra mieritreritra ny hitàna anjara toerana ao amin'ilay faritra. Raha toa mampitombo ny asa fampihorohoroany ao amin'ny saikinosy arabo (AQPA) ny vondrona al-Qaïda sy ny Daesh, malaza ho ny sampana atahorana indrindra ao anatin'ity hetsika natsangan'i Oussama ben Laden ity, manao tsy omby aloha any kosa ireo firenena lehibe mba hametraka ny fitaovany ara-miaramila sy ny tafika mitam-piadiana.
Raha ny fisian'i Parisy tao no efa tranainy indrindra – ny 1977 i Djibouti no nahazo ny fahaleovantenany nanoloana an'i Frantsa saingy mbola miara-miasa aminy hatramin'izay – nitombo ny lanjan'ity Firenena Afrikana ity taorian'ilay fanafihana tamin'ny 11 Septambra. Efa tao hatramin'ny 2002 saingy tamin'ny 2014 dia nohavaozin'i Etazonia hiampy folo taona indray ny fifanaraham-piarahamiasany, sandainy 40 tapitrisa dolara isan-taona; mihevitra ny hampiasa iray lavitrisa dolara any ny “Pentagone” ato anatin'ny roapolo taona hoavy, mba hanitarana ny tobiny. Ny filoha Obama no manazava ny antony :
There’s a significant presence of soldiers from Djibouti who are participating in the multinational force that has been able to push back al-Shabab’s control over large portions of Somalia
Misy miaramila Djiboutiana marobe mandray anjara amin'ny tafika iraisampirenena izay afaka nanosika tsara ireo Al-Shabab nifehy faritra midadasika tany Saomalia.
Araka izany, aorian'i Frantsa, Etazonia, fa koa i Japana sy Alemàna, dia anjaran'i Shina indray izao no « mitaky» ny hanana tombim-pamaharana ao Djibouti. Raha toa ka antony ara-toekarena no tena manosika ny fangatahan'i Pekin – mitombo isan-taona ny dindo apetrany ao amin'ny faritra –, tsy azo esorina ao anatin'izany ihany koa ny fisian'ireo andianà djihadista marobe any Afovoany Atsinanana. Maniry ny governemantan'i Xi Jinping araka izany ny mba hanao izay haha-azo antoka ny famatsiana solika azy, nefa ireo djihadista an'ny Daesh no mifehy betsaka ireo loharano goavana amin'ity “volamena mainty” ity ao Siria sy Iràka.
Djibouti, tany mandray ireo mpialokaloka
Raha toa ka loharanom-bola goavana ho an'ny governemantan'i Omar Guelleh ny fisian'ireo vahiny ao Djibouti – manodidina ny 200 tapitrisa dolara–, tsy dia misy tonga loatra any amin'ny vahoaka izany. Antony mandranitra, mazava loatra, ny lonilony lalin'ireo Djibotiana amin'ireo tafika iraisampirenena tonga ao amin'ny taniny. Kanefa, midika ho tany mandray ireo mpialokaloka avy amin'ireo fifandonana any amin'ny manodidina azy ihany koa io. Raha toa mampitombo ny hetsika feno habibiana ao amin'ny faritra ireo djihadista – na izy avy amin'ny laharan'ny AQPA, na Daesh, na Ansar Allah, na ny hetsiky ny Shiita izay manjakazaka ao Yemen amin'izao fotoana izao, na koa ireo Shebab islamista Somaliana – ireo mpialokaloka kosa tonga manao rodobe ao Djibouti. Ohatra, ity firenena ity no iray amin'ireo vitsy izay mandray ny olona mandositra avy any Yemen.
Araka ny voalazan'ny Kaomisaria Ambony Misahana ny Mpitsoa-ponenana ao amin'ny Firenena Mikambana (UNHCR), efa ho 15.000 ry zareo no Yemenita hiampita ny helodranon'i Aden mba handeha hialokaloka ao Djibouti ato anatin'ny enim-bolana ho avy.
Azo antoka fa hametraka tsindry amin'ny Fanjakana izany. Firenena kely izay efa tsy miantsy miatrika ny haintany io, manana taha avo be amin'ny tsy fananana asa sy fahantrana lalina.
Fanairana avy amin'ny mpitondra tenin'ny UNHCR, Frederic Van Hamme.
Toe-draharaha ara-toekarena izay nitarika, nandritry ny taona maro, ny firoboroboan'ny varotra iray somary miavaka na dia efa iainana isanandro aza : ny fiampitàna an-tsokosoko avy any amin'ny tandrok'i Afrika ho any amin'ilay saikinosy Arabo. Noho ny fifandonana ao Yemen fotsiny, natsahatr'ireo mpampiampita ny asa fanaony ary dia mivangongo ao Djibouti ny olona. Mety hitambotsitra araka izany ity firenena ity, izay fanalahidin'ny tolona atao amin'ny djihadisma any amin'ny faritra, raha ny fivangongoana be loatra sy ny haratsian'ny toe-karena no jerena, raha toa ka tsy mihetsika ireo hery vahiny.
Lahatsoratra nosoratan'i Alassane Ndoumbè, mpanoratra monina ao Dakar.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/06/04/70692/
 manazava ny antony : http://www.washingtonpost.com/politics/us-djibouti-reach-agreement-to-keep-counterterrorism-base-in-horn-of-africa-nation/2014/05/05/0965412c-d488-11e3-aae8-c2d44bd79778_story.html